Nova 3i မှာသုံးတဲ့ Kirin 710 နဲ့ Snapdragon 710 တို့ ရမှတ်ယှဉ်ကြရာဝယ် – DigitalTimes.com.mm
0 Shares 7147 Views
Nova 3i မှာသုံးတဲ့ Kirin 710 နဲ့ Snapdragon 710 တို့ ရမှတ်ယှဉ်ကြရာဝယ်
Nova 3i လို့လူပိုသိကြတဲ့ Huawei INE-X2 ကတော့ Geekbench ကိုေ၇ာက်လာခဲ့ပါပြီ။ ဆိုတော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ Kirin 710 ရဲ့ Benchmark ရလဒ်တွေနဲ့ Snapdragon 710 တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ…….
Kirin 710 ဆိုတာကတော့ Cortex-A73× 4-cores(2.2GHz) နဲ့ Cortex-A53 ×4-cores(1.7GHz) စုစုပေါင်း 8-coreရှိတဲ့ 12nm Octa-core chip လေးတစ်ခုပါပဲ။ သူနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် Snapdragon 710 က Kryo 360 Gold(2.2GHz) × 2-cores + Kryo 360 Silver (1.7 GHz)× 6-cores ရှိတဲ့ 10nm Octa-Core Processor တစ်ခုပါပဲ။ သူတို့ကတော့ Cortex-A75 နဲ့ A55 တို့ပေါ်အခြေခံထားတာပါ။
သူတို့ကိုယှဉ်လိုက်တဲ့အခါ မှန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲ Snapdragon တွေက Single Core စွမ်းဆောင်ရည်မှာ A73 တွေထက် ၂၀% ပိုမြန်ပြီး A55 တွေကတော့ A53 တွေထက် ၁၈% လောက်ပိုမြန်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Multi-Core Result တွေကတော့ အရမ်းကြီးသိပ်မကွာပါဘူး။
Kirin 710 chipset တွေကတော့ Huawei ရဲ့ အရင် Mid-range ဖုန်းတွေမှာသုံးခဲ့တဲ့ Kirin 659 chipset တွေထက်ကို Single-core စွမ်းဆောင်ရည်မှာ၂ဆနီးနီးလောက်တောင်ခုန်တက်လာတဲ့အတွက် တော်တော်ကြီးအဆင့်မြှင့်လိုက်တယ်လို့ ပြောရမှာပါ။
Nova 3i လို့လူပိုသိကွတဲ့ Huawei INE-X2 ကတော့ Geekbench ကိုရောကျလာခဲ့ပါပွီ။ ဆိုတော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ Kirin 710 ရဲ့ Benchmark ရလဒျတှနေဲ့ Snapdragon 710 တို့ကိုနှိုငျးယှဉျကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ…….
Kirin 710 ဆိုတာကတော့ Cortex-A73× 4-cores(2.2GHz) နဲ့ Cortex-A53 ×4-cores(1.7GHz) စုစုပေါငျး 8-coreရှိတဲ့ 12nm Octa-core chip လေးတဈခုပါပဲ။ သူနဲ့ယှဉျလိုကျရငျ Snapdragon 710 က Kryo 360 Gold(2.2GHz) × 2-cores + Kryo 360 Silver (1.7 GHz)× 6-cores ရှိတဲ့ 10nm Octa-Core Processor တဈခုပါပဲ။ သူတို့ကတော့ Cortex-A75 နဲ့ A55 တို့ပျေါအခွခေံထားတာပါ။
သူတို့ကိုယှဉျလိုကျတဲ့အခါ မှနျးထားတဲ့အတိုငျးပဲ Snapdragon တှကေ Single Core စှမျးဆောငျရညျမှာ A73 တှထေကျ ၂၀% ပိုမွနျပွီး A55 တှကေတော့ A53 တှထေကျ ၁၈% လောကျပိုမွနျသငျ့တယျလို့ထငျပါတယျ။ Multi-Core Result တှကေတော့ အရမျးကွီးသိပျမကှာပါဘူး။
Kirin 710 chipset တှကေတော့ Huawei ရဲ့ အရငျ Mid-range ဖုနျးတှမှောသုံးခဲ့တဲ့ Kirin 659 chipset တှထေကျကို Single-core စှမျးဆောငျရညျမှာ၂ဆနီးနီးလောကျတောငျခုနျတကျလာတဲ့အတှကျ တျောတျောကွီးအဆငျ့မွှငျ့လိုကျတယျလို့ ပွောရမှာပါ။
Google က Pixel3နဲ့အတူ Pixelbook အသစ်ကို ကြေညာနိုင်